हिमाल खबरपत्रिका | सरकार साथ छ!
सरकार साथ छ!
सुझबुझ विनाका बकम्फुस्हरूले फत्तुर उद्योग चलाउँदा असाध्य गतिशील सरकारलाई गरिखान गाह्रो–गाह्रो भएर ल्या'को छ।
आदरणीय जाजरकोटवासी जनता,
बैरीहरूले कान फुकेर सरकार–जनता हार्दिक सम्बन्धमा औंसा पार्न खोज्या छन्। त्यस्ता चुक्लीखोरहरूले छाडेको प्रदूषित बतासबाट संक्रमित नहुन आग्रह छ। जाजरकोटमा बेलाबेला झिनामसिना रोगहरूले मच्चाउने उत्पातबारे विगतका सरकारहरूले सुर्ता जाहेर गरेको विदितै छ। अहिले सिजनल फ्लु फैलिएर तपाईंहरूले दुःख बेसाउनु परेको सुन्दा वर्तमान सरकार पनि अतीव द्रवित छ। सरकारले महसूस गरेको पीडाको आयतन यो पत्रबाट अनुमान लगाउनुहोला। यसले प्रकोप पीडित जनतालाई ठूलो राहत दिनेमा हामी विश्वस्त छौं। सरकारको सदासयतामा अझै कैफियत देखिए डुकुलट्ठक झैं रल्लिएर फ्लु फैलाउने भाइरस विरुद्ध मन्त्रिपरिषद्ले खेद प्रस्ताव पनि पारित गर्न सक्नेछ।
ऋषिमुनिहरूले अड्डा जमाएको तपोभूमिका निवासी नेपाली जनताले प्रकृतिसँग पौंठेजोरी खेलेर बाँच्न भलिभाँती जानेका छन्। खोला, खोल्सा, पोखरीको गन्धे पानीदेखि अखाद्य चामलसम्म हाम्ले पचाएकै थिम् क्यारे! औलो, विफर, मलेरिया, क्षयरोग आदि माथि रैफाँडो मच्चाएरै हामी इबोलाको जुगमा छाती तन्काएर उभिएका हुम्। रोगव्याधी र विपत्सँग आफ्नै बर्कतमा लड्ने बहादुर जनता भएरै हो, सिंहदरबारमा कुपुकुपु बुक्याएर भुसुभुसु सुत्न सम्भव भएको छ।
खासमा, त्यो सुँगुरे फ्लुले केही लछारपाटो ला'को हैन, मिडियावालाले हाउगुजी मच्चाएका हुन्। यो कुरा सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रीले भनिनै सक्नुभएको छ। वास्तवमा यो सूचना भन्ने जिनिसलाई बेलगाम हिनहिनाउन दिनु नहुने रै'छ। पत्रकारले समाचार लेख्ने नाममा उताका सूचना यता पारे। बिरामी र मृतक संख्या गनेर जनता तर्साए, सरकारको फजिती काढ्ने उद्योग गरे। बित्थामा जनताको चैन खराब, सरकारको निद हराम्!
महामारी नियन्त्रणमा सरकार उदासीन रहेको हल्ला फैलाउनेहरू झूटको खेती गरिरहेका छन्। सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा ओखती अभाव र डाक्टर गायब भएको दृश्य टेलिभिजनमा चाखपूर्वक हेरेको हेर्‍यै छ भने उदासीन भन्न कसरी मिल्छ? पियनकै भरमा उपचार अघि बढाएको दृश्यले सरकारले फिल्डमा देखाएको फुर्ती दर्साउँछ। त्यसमाथि, नटेर्लान् भन्ने ठूलो जोखिम हुँदाहुँदै पनि सरकारले डाक्टर महोदयहरूलाई जाजरकोट जान अनुरोध–पत्र पठाएको छ। अन्यथा, कारबाही हुने बिन्ती समेत बिसाएको छ।
प्रकोप नियन्त्रणको सरकारी योजनामा मौसमले भाँजो हालेको पनि नभुलौं। गर्मी बढ्ला र भाइरसहरू ओइलाउलान् भन्दै तीन साता धैर्य गरियो, तर वैशाखसम्मै हिउँ परेर मर्‍यो! यसरी यसपालि धोका भए पनि आगे साल मौसम दाहिना हुनेमा सरकार विश्वस्त छ। भोलिबाटै हरेक बिहान सूर्यलाई नमस्कार गर्दै आगेसाल बेलैमा तापमान बढाइदिन पुकारा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। यो मामलामा सरकारी चिन्ता बुझन ज्ञानीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हेर्दा हुन्छ। जाजरकोटेको पीडाले पोलेर उहाँ तीन किलो जति घटिसक्नुभो। र पनि, सरकारलाई जस नदिनु ज्यादती हो!
हेलिकोप्टरको कुरा पनि फत्तुर उद्योगको र्‍याईंर्‍याईं मात्र हो। रूपाकोट होस् कि खुर्कोट, थानकोट होस् कि जाजरकोट, ट्वाक्क विधि–प्रक्रिया नमिलाई सरकारले हेलिकोप्टर उडाउने अनुमति दिंदैन। विधि र प्रक्रियालाई 'मिक्स' प्राणवायु बनाएको सरकारले उडाउने जिनिस् हो भन्दैमा जसले जतिबेला भन्यो, त्यतिबेला हेलिकोप्टर कसरी उडाउन सक्छ? त्यसकारण, फत्तुरेहरूले हेलिकोप्टर नउडेर जाजरकोटमा ओखती पुगेन भन्ने डंका पिट्नुको कुनै अर्थ नाइँ। त्यसमाथि, सरकारले जाजरकोटमा विशेषज्ञ टोली खटाएसँगै गर्मी बढेर कीटाणुहरू लखतरान हुन थालिसकेको पनि हेर्नुपर्‍यो नि!
दैवले अर्थोकै मर्जी गरेछन् भने पनि तपाईंहरू मझ्धारमा बहादुरीपूर्वक डट्नुहोला। जनताको होस्टेमा हैंसे भनिदिने कर्तव्यबाट यो सरकार च्यूत हुने छैन। कालीकोटे र जुम्ली जनता पनि जाजरकोटवासीबाट धैर्यको पाठ सिक्दै गर्नुस्। रातपछि दिन आउने कुरा मनमा गाँठो पार्नुस्। साह्रै सकस पर्‍यो भने पनि 'जे हुन्छ, अच्छाकै लागि हुन्छ' भन्ने गीतावाणीलाई सपाट ढङ्गले पाठ गर्नुस्। चित्त स्थिर पार्नुस्, सरकार तपाईंहरूको साथ छ!